Xulka Puntland oo ku guuleystay Koobka Maamul Goboleedyada – STAR FM SOMALIA
Xulka Puntland oo ku guuleystay Koobka Maamul Goboleedyada
Xulka Puntland ayaa ku guuleystay Koobkii Maamul goboleedyada, kadib markii rigoorayaal 5-3 uga badiyeen xulka Jubbaland ciyaartii Finalka oo aheyd mid xiiso leh ayaa waxaa ka so qeyb galay kumanaan ruux.
Labada xul ee Puntland iyo Jubbaland ayaa soo bandhigay ciyaar aad u fiican, kana muuqatay farsamo aad u wanaagsan, iyadoo sagaashankii daqiiqo iyo sodon daqiiqo oo dheeri ah ay ku dhamaatay bar bar dhac 1-1.
Waxaa jiray fursado wanaagsan oo ay iska khasaariyeen labada xul, waxaana Ciyaartoyda Puntland iyo Jubbaland ay labadaba fursadooda ugu wanaagsan aheyd markii ay birta labadaba ku garaaceen.
Xulka K/cagta ee Jubbaland ayaa goolka ku hormartay daqiiqadihii hore ee ciyaarta qeybta hore, hase ahaatee Ciyaartoyda Puntland ayaa iska soo guday oo bar bareeyay isla qeybtii hore.
Ciyaarta ayaa aheyd mid si aad ah isha loogu hayay, waxaana xamaasad u sii yeeshay balan-qaadyo loo fidiyay labada ciyaartoy ee Maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Telefishinada Qaranka Soomaaliya ee SNTV ayaa si toos ah looga daawanayay ciyaarta oo dadweynaha Soomaaliyeed ay si aad ah u xiiseynayeen
Daawashada ciyaarta ayaa waxaa ka soo qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid, Wasiiro, Xildhibaano, Safiirka Turkiga Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed.
Tartanka Maamul goboleedyada oo ah kii u horeeyay ee la qabto laguna marti geliyo Gobolka Banaadir ayaa bilowday 15-kii bishan, waxaa ka soo qeyb galay illaa lix kooxood oo ka kala ahaa Xulalka K/cagta Maamul goboleedyada, Puntland, Galmudug, Koofur Galbeed, Jubbaland, Koox ka socotay Gobolka Banaadir iyo Ciyaartoy mataleysay Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Dawladda Mareykanka oo Canbaaraysay Qaraxyadii Muqdisho Ka Dhacay Maaanta.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 26-07-2016